The akasununguka paIndaneti basa. chikwereti Calculator
Chikwereti izwi mumwedzi
pagore negore zvemba
Kupinda uwandu uye izwi iri chikwereti, kufarira rates mhando muripo.
The Calculator kuchaita ngaaverenge uwandu vachibhadhara, chikwereti uye mutengo kukuvimba.
More vanhu zvikuru kutenga vari kukweretesa mabasa. Banks uye masangano asiri kubhengi kupa kuwana chikwereti zvakasiyana-siyana ezvinhu. Kana ukatora panze hombe chikwereti, somuenzaniso, kutenga mufurati, motokari, chikwereti kuvaka imba, kana kukura Bhizimisi ravo, zvakakosha kuziva kuti chikwereti ichi uchakwanisa kuita. Kuti ave nechokwadi yokusarudza chirongwa zvikwereti, tinopa iwe kushandisa kwedu chikwereti Calculator. Pindai muminda zvakakodzera chikwereti mari, uye chikwereti mutsividzo nguva mumwedzi uye chimbadzo, uyewo kutaridzwa muripo mhando - pagore negore kana differential, uye iwe unogona kuwana kubva chikamu kubhadhara chikwereti chacho inoshandiswa kubhadhara zvikwereti uye sei zvikuru kuti abhadhare kufarira pamusoro chikwereti, pachiyero chikwereti yaro mwedzi, kukura overpayment sechinhu mwedzi, uye yose chikwereti rokuti, uye chaicho chimbadzo pamusoro chikwereti.
Kana nzira kusiyaniswa pakati mutsividzo zvikwereti kuti chikwereti chitsama chikwereti rakakamurwa zvakaenzana nemigove. migove izvi zvinoumba unorema remwedzi kubhadhara. The residual Chikamu anomiririra yechimbadzo vasingabhadharwi pakuenzanisa pamusoro chikwereti. Saka kubva pamwedzi pamwedzi kubhadhara kuderedzwa saizi.
In nzira iyi mutsividzo pakati chikwereti varipo zvainovhiringidzawo.
Chief pakati pavo ndechokuti chikwereti chacho pamwe chemhosva zvikwereti kunoreva zvakawanda zvakaoma kuwana.
Bank kuverenga kunonyanyisa chitsama chikwereti pahwaro kana akakwereta anokwanisa kubhadhara yokutanga yakavamba. Izvi zvinoreva kuti kuwana chikwereti yakadaro chinodiwa kuva mukuru mari yakakwana. Mune zvimwe zviitiko, zvingava kubatsira mari yechibatiso guarantors kana co-anokwereta kukwezvana.
Chimwe drawback ndechokuti yokutanga yezana rokuti muripo anokwereta anova yakanyanya kuoma. Kana tiri kutaura pamusoro hombe chikwereti zvinogona kuva mutoro unorema nokuti anokwereta. Asi munguva yemberi chinetso ichi inogona dzikava chiremera. Mitengo uye kuderera kufarira mari akaita zvishoma mutoro.
Panguva pagore negore nzira mutsividzo zvikwereti pamusoro chikwereti rakakamurwa yakaenzana mativi hakusi chete uwandu chikwereti, asi vo mubereko pachiri yose chikwereti izwi. Saka, chikwereti unoripa yakaenzana mipiro pakukura yose nguva muripo. Nhasi, nzira iyi mubayiro yaishandiswa zvikuru zvokutengeserana mabhanga. The chikuru zvakaipira annuities ndechokuti uwandu overpayment pamusoro chikwereti achava dzakakwirira kupfuura kusiyaniswa hurongwa. Mukuwedzera pagore negore kubhadhara maitiro achipfeka kuti yokutanga yezana chikwereti rokuti iwe mari kunyanya yechimbadzo chikwereti. Asi chikuru Verengai chikwereti ichi nguva akasara anenge zvinongoramba.
Kana uchida kutora chikwereti wemuno uye asingauyi kuronga chokukuripa nacho akashaya, uchabvuma chikwereti chete pagore negore muripo hurongwa.
Mune zvimwe zviitiko, kunyanya kana totaura zvikwereti kwenguva refu, zviri nani kusarudza bhanga kuti anopa zvikwereti pamwe kusiyaniswa kubhadhara.